Momba an'i Dubai | Law Firms Dubai
Momba an'i Dubai
Nalaza eran'izao tontolo izao ho ivom-pitobian'ny varotra iraisam-pirenena sy fanavaozana iraisam-pirenena, Dubai dia lasa iray amin'ireo toeran'ny mpizahantany malaza indrindra.
Dubai dia tanàna mahafinaritra izay mamorona iray amin'ireo 7 amin'ireo emirates ao UAE.
Ireo fisintonana mahavariana
Ny Dubai dia manome endrika mahaliana toy ny Burj Khalifa, mitahiry tranom-pivarotana manokana ary manaram-boly amin'ny fety izay tarihin'ny tsiro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny hotely 7 kintana.
Dubai no tanàna be mponina sy be mponina indrindra ao UAE. Maherin'ny 2.7 tapitrisa ny olona avy amin'ny firenena 200 izay monina ao an-tanàna. Mpizahatany sy mpivarotra tsy hita isa no miditra amin'ny tanàna ho an'ny fandraharahana, na fahafinaretana isan'andro. Dubai dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hanaovana asa aman-draharaha eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ireo haitao ara-teknika sy fotodrafitrasa, tsy misy hetra ary toerana misy stratejika eo afovoan'ireo kaontinanta ara-barotra lehibe. Ny fanambinana sy ny fihoaram-bidy be dia be ao amin'ity fanjakana-mahatalanjona ity no antony mahatonga an'i Dubai ho iray amin'ireo toeran'ny mpizahatany manerantany!
Tantara fohy any Dubai
Mankafy ny hafanan'ny masoandro mandritra ny taona, miaraka amoron-dranomasina mahavariana, toeram-pivarotana mahaliana, tranom-pivarotana mahavariana ary trano fandraisam-bahiny, zava-bita sy lova mahafinaritra ary vondrom-piarahamonina miroborobo, ny City of Dreams dia tarihin'ny mpitsidika an-tapitrisany sy fialamboly isan-taona izay avy amin'ny zorony samy hafa izao tontolo izao.
Ny fianakaviana Maktoum sy ny mpikambana 800 avy amin'ny foko Bani Yas dia namorona ny fonenany teo am-bavan'ny creek tamin'ny 1833. Io voromahery io dia seranan-javaboary voajanahary, ary tsy ela dia lasa, Dubai dia tonga foibem-barotra fivarotana perla sy ranomasina ary fanjonoana. Rehefa tonga ny taona faha-20 taonjato lasa dia lasa seranana miroborobo ny tanàna.
Ny tsena na souk amin'ny teny arabo, izay eo amin'ny sisin'ny kintan'i Deira no lehibe indrindra amin'ity morontsiraka ity, manompo trano ho an'ny fivarotana 350 miaraka tsy tapaka ny mpandraharaha sy ny mpitsidika. Nandritra ny fahitana solika tamin'ny taona 1966, nampiasa ny vola avy amin'ny solika i Sheikh Rashid mba hanomboka hanomboka ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa ao an-tanàna.
Ny tanànan'i Dubai
Androany, Dubai dia lasa tanàna iray mirehareha noho ny maritrano fanaovan-tsarimihetsika mahafinaritra, ny fanatanjahantena an-tserasera sy hetsika fialamboly ary ireo hotely tsy voatanisa. Ny ohatra tsara dia tsy hafa raha tsy ilay trano fandraisam-bahiny Burj Al Arab mamelona ao amin'ny morontsirak'i Jumeirah. Io irery no trano fandraisam-bahiny izay manolotra serivisy 7 kintana. Ao koa ny Emirates Towers, izay anisan'ireo rafitrasa marobe izay hampahatsiahy anao ny fahatokisana ara-barotra ao an-tanàna izay maniry sy mitombo amin'ny ambaratonga miavaka.
Ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe maneran-tany dia matetika no raisina ao Dubai. Ao ny Dubai Desert Classic no fijanonana lehibe amin'ny fitsangatsanganana Golf Association matihanina. Mpizahatany an'arivony isan-taona no voasariky ny amboara eran-tany any Dubai, fifaninanana soavaly manankarena indrindra manerantany, fifaninanana tenisy ATP ary Dubai Open.
Dubai no habaka fandraharahana lehibe indrindra ao amin'ny faritra, ary izany dia noho ny toerana misy azy eo afovoany, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny maha-zava-dehibe ny varotra iraisam-pirenena. Saingy, amin'ny maha-fanjakana silamo, misy fitsipika mifandraika amin'ny fihaonana amin'ireo matihanina amin'ny firaisana mifanohitra, ka tafiditra ao ny tsy fananana tànana. Aza hadino ihany koa fa mivavaka dimy isan'andro isan'andro ny Silamo. Na izany aza, matetika dia tsy voamarik'ireo mpandeha mpandraharaha izy ireo.
Noho ny toerany tsara, ny fampifandraisana tsara sy ny serivisy fandraharahana rehetra dia i Dubai izao no foiben'ny varotra sy ny varotra eto amin'ny faritra rehetra. Ny governemanta dia manohana ny orinasam-bola miaraka amin'ireo fitsipika mangarahara indrindra hita any amin'ny faritra rehetra. Misy zoro tsy mandoa hetra ao an-tanàna, fotodrafitrasa kilasy maneran-tany ary miditra ho mpiasa miasa an-tsaina sy za-draharaha. Tafakatra i Dubai mba ho iray amin'ireo toekarena metropolitanina eran'izao tontolo izao noho ny haben'ny asany, ny fitomboan'ny haben'ny per capita ary ny stratejika amin'ny alikaola.
Ny toekarena ao Dubai tamin'ny voalohany dia natsangana tamin'ny varotra nentim-paharazana, fa nifindra tany amin'ny loharanon-karena voajanahary hatramin'ny faramparan'ny taonjato faha-20, lasa nanjary toekarena avy amin'ny solika. Na izany aza, ny fidiram-bolan'ny solika dia mifameno tsikelikely ary taty aoriana dia saika nosoloana toekarena tantanan'ny tolotra miorina amin'ny fahalalana.
Ny fironan-kevitry ny Emirate amin'ny fanatontosana ny teknolojia sy ny fanavaozana maoderina no antony nahatonga ny fanohanana feno ho an'ny orinasam-pifandraisana vahiny mitady hametraka ny tenany ao Dubai.
Maherin'ny 90% amin'ny asa aman-draharaha ao amin'ny Emirate ankehitriny dia misy ny varotra, serivisy ara-bola, ny logistika, ny fandraisana olona ary ny fizahan-tany, ny trano fonenana, ny fananganana sy ny famokarana, izay namorona 90% ny asa aman-draharaha tao amin'ny Emirate
Miaraka amin'ny toerany stratejika, foto-drafitrasa kilasy manerantany, fanamorana ny asa aman-draharaha, ary fanitsiana io, safidy Dubai voajanahary ho an'ny fikambanana eo an-toerana sy iraisam-pirenena izay maniry ny manomboka miasa na manitatra any Atsinanana Afovoany.
Na dia mety ho haingana ihany aza ny fiakaran'ny meteorika an'i Dubai, dia efa voapetraka tsara ankehitriny ny tanàna ho toerana voalohany amin'ny Afovoany Atsinanana ho an'ny foiben'ny orinasam-pirenena maro be. Ny laza eran-tany ho toy ny fiarovana matanjaka sy mpamokatra harena dia manohy ny fitomboan'ny tanàna ary manintona ireo orinasa manerantany sy SME iraisam-pirenena.
Kolontsaina sy fomba fiaina
Manana lova ara-kolontsaina arabo i Dubai. Na dia efa mifangaro tanindrazana izao aza, torapasika ary fombafomba nataon'olombelona, ​​dia mbola tena manentana ny kolontsainan'ny olona ao Emirati. Dubai dia monarchie tena izy ary nanjakan'ny fianakaviana Al Maktoum hatramin'ny 1833. Na dia voatolotry ny fomba amam-panao sy kolontsaina aza ny fiainana any Dubai, ny UAE dia toerana mahafinaritra mandray vahiny.
Voatahiry ny lova islamirianina an'ny Emirati, satria Silamo no maro an'isa, fa ny mponina vazimba dia mandefitra be amin'ny kolontsaina hafa sy ny olona manana finoana ara-pinoana hafa. Vokatr'izany, Dubai dia manana trano ho an'ny zom-pirenena 200 mahery. Manerana ny tanàna be mpivezivezy dia misy trano fisakafoanana sy kafe 6000 mahery manolotra sakafo avy amin'ny sisin'ny kontinanta rehetra.
Anisan'ny zavatra mahasarika indrindra an'i Dubai misy ny safidiny ihany koa. Antoka kely ho an'ny mpivarotra eo an-toerana na avy any ivelany izany noho ny fividianana tsy misy hetra azon'ny olona atao. Hahita toeram-pivarotana goavambe sy be vava ianao izay manolotra traikefa farany amin'ny fivarotana mahasoa, fa raha mpihaza mpividy kosa ianao mitady ny fividianana tsara indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra, dia ny fonosana malaza any Dubai no nahalasa anao.
Misy zavatra ho an'ny mpitsidika rehetra, manomboka amin'ny fitafiana akanjo ho an'ny souvenir, gadget, sakafo eto an-toerana sy ny maro hafa. Ny sasany amin'ireo toeram-pivarotana tsara indrindra dia ny The Dubai Mall, Wafi Mall, Mall of the Emirates, Deira Gold Souk, Global Village, Burjuman Center, Souk Madinat Jumeirah. sy ny maro hafa.
Landmarks ao Dubai
Dubai dia trano fonenana mahavariana sy mahavita asa maritrano izay nanova ny faritry ny tanàna sy ny lanitra. Ny sasany amin'ireo mari-pamantarana dia manana ny maha-izy azy ny sasany amin'ny fahagagana avo indrindra sy lehibe indrindra ary glitziest eto amin'izao tontolo izao. Ny sasany amin'ireo mari-pamantarana marika ireo dia ny Burj Khalifa; ny rafitry ny olona ambony indrindra indrindra eto an-tany amin'ny 828 metatra. Izy io no iray amin'ny fomba mahaliana indrindra any Moyen-Orient ary antsoina hoe Jewel of Dubai.
Palm Jumeirah; vondronosy vita noforonin'olombelona, ​​izay iray amin'ireo telo natao amin'ny Nosy Palm ary ny farany amin'ny lisitra lava be mpizara atolotra. Ny nosy dia manolotra hetsika maro ho an'ny mpizahatany hilazana azy ireo. Anisan'izany ny toeram-pivarotana tsena amin'ny tsena mankany amin'ny hotely, trano fandraisam-bahiny mahavariana, ary maro hafa, ny alàlan'ny Al Sahra Desert Resort dia nametraka teo afovoan'ny kijana milamina ary nanolotra traikefa nahafinaritra tamin'ny hetsika any an'efitra.
Ny hotely dia mampiantrano karazana hetsika isan-karazany sy fankalazana ary manome safidy fisakafoanana marobe, ilay hotely Burj Al Arab 7 kintana; izay trano fandraisam-bahiny fahefatra avo indrindra eto an-tany izay manolotra indrindra indrindra amin'ny haitraitra. Ity trano fandraisam-bahiny ity dia asa tanana maritrano izay tsy mitovitovy amin'ireo trano hafa eto amin'izao tontolo izao.
Ny Loharano any Dubai; izay manana fahaizana mamofona rano mihoatra ny 22,000 litatra ao amin'ny rivotra ka hatramin'ny 902 metatra ny halavany ary manazava jiro 6,600 sy projectors 25 loko, ary maro hafa.
Fampahalalana ambony any Dubai
Avy any amin'ny tanànan'ny fiadanam-be any an-efitra ka hatrany am-pandrahonana dia manome ny mpizaha tany ho an'ny maro mpankafy i Dubai.
Na dia eo aza ny faritra somary kely dia maro ireo toerana misy azy izay azonao jerena ao amin'ny emirate. Tao anatin'ny andro iray monja dia hahita traikefa be ny fizahantany iray, avy any an-davaky ny fasika sy ny tendrombohitra feno be hatrany mankany amin'ny zaridaina maintso sy torapasika fasika, avy amin'ny distrika fonenana mahasosotra mankany amin'ireo vovoka feno vovoka, ary avy amin'ny trano fivarotana avant-garde ka hatramin'ny taloha trano feno tilikambo.
Ny emirate dia fitsoahana fialantsasatra ho an'ireo mpizahatany ary ivon-toeram-pandraharahana manerantany miaraka amin'izay. Tanàna iray izay niraisan'ny fahatsoran'ny taona lasa ny classiness tamin'ny taonjato faha-21. Ary noho ireo fifanoheran-kevitra ireo dia manome ny tanànan'i Dubai endrika iray sy toetra amam-panahy izy io, fiarahamonina cosmopolitan izay mirehareha amin'ny fomba fiainana manerantany.
Ahoana ny fanovana ny nomeraon-telefaona voasoratra amin'ny ID Emirates anao any Dubai/UAE